Laxanka iyo heesaha reggaeton sanadkaan 2017 | Ragga Stylish
Diskoo kasta ama hoolka qoob-ka-ciyaarka Reggaeton waa dhawaqa moodada. Joogitaankiisu wuxuu umuuqdaa inuusan rabin inuu seego xaflad kasta.
Waxaa jira siyaabo badan oo loo dhageysto reggaetón. Wax walba maahan laxanka, firfircoonida iyo qoob ka ciyaarka. Sidoo kale dhawaqyadan waxaa loo maqli karaa qaab jilicsan, oo ku raaxeysanaya daqiiqad kasta.
1 Farxad 4, Maluma
2 4 Ilmaha, Maluma
4 Jasiiradda Jacaylka, Demarco Flamenco ft Maki
5 Deja Vu, Prince Royce iyo Shakira
6 Súbeme la radio, Enrique Iglesias ft Descemer Bueno, Zion iyo Lennox
Ku farax dhamaan 4, Maluma
Arrin abuurtay muran ku saabsan doorbidooda galmada ee su'aalaha laga qabo qaybo badan. Maluma muddo dheer ayaa lagu rakibay meesha ugu sareysa qiimeynta muusikada ka yimid Isbaanishka, Mareykanka iyo Latin Amerika.
Hees leh chorus sii jiraya oo miyir daboolmay ee kuwa dhagaysta oo dheesha.
4 Carruur, Maluma
Maluna, ciyaaryahanka reer Colombia ee reggaeton ayaa urursaday in ka badan 760 milyan oo muuqaal ah oo laga daawado barta Youtube. Heesahiisa ayaa sidoo kale muran dhaliyay, lagu eedeeyay
misogyny, oo bixiya waxyaabo aad u liidata oo meel ka dhac ah.
Doodwanaag, Luis Fonsi ft Daddy Yankee
Mawduuca moodada. Fonsi wuxuu ka dhigayaa laxankiisa soo jiidashada leh si dabiici ah codkiisa codkiisa. Waa inaad xusuusataa inuu yahay aad looga bartay boodhka boodhka marka loo eego habdhaca Kariibiyaanka.
Heestani waxay isku soo rogtay awood buuxda xagaagan 2017.
Jasiiradda jacaylka, Demarco Flamenco ft Maki
Heesta Isbaanishka wuxuu isku daraa laxanka flamenco iyo laxanka reggaetón. Waa hees aad u cusub, xaadir ah oo firfircoon, taas oo ku jabtay dhaqankii muddooyinkii ugu dambeeyay, marka la eego teebabka elektarooniga ah, isku-darka iyo mashiinnada durbaannada.
tomato VU, Prince Royce iyo Shakira
Prince Royce iyo Shakira waxay ku kulmayaan bachata. Waa qayb ka mid ah sixirka reggaetón, kaas oo ku midoobaya farshaxan-yahannada ugu fiican ilaha codka dhawaaqa korantada.
Ii diyaari raadiyaha, Enrique Iglesias ft Descemer Bueno, Zion iyo Lennox
Mid kale oo kamid ah guulihii waaweynaa ee sanadkan 2017. Enrique Iglesias wuxuu naftiisa u ogolaanayaa inuu ku dhaco cudurka laxanka reer Caribbean ee ugu fiican. Xusuusnow fiidiyowga heestan, oo lagu duubay goobo ku yaal Havana, oo ay ka qayb qaateen tiro wanaagsan oo qoob-ka-ciyaaraya iyo waxyaabo dheeraad ah.
Ilaha sawirka: Telemundo / Kooxda SAPS
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » Waqtiyada firaaqada » Reggaeton ee 2017